HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Basque Bichlamar Catalan Chichewa Cinghalais Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Fante Frantsay Ga Galicienne Galoà Grika Groenlandey Géorgien Haoussa Hebreo Holandey Hongroà Ibo Iloko Indonezianina Iokrenianina Italianina Japoney Kazakh Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kongo Koreanina Kroaty Lingala Litoanianina Malagasy Malayalam Malezianina Mam Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Nahuatl (Afovoany) Nahuatl (Huasteca) Ndebele (Zimbabwe) Ngabere Norvezianina Népali Oromo Ourdou Pendjabi Persianina Poloney Portogey Portogey (Portogaly) Romanianina Rosianina Serba Serba (Soratra Romanina) Shona Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Tagalog Tahisianina Tajiki Tankarana Tarasque Tigrigna Tiorka Tiv Tongan Tseky Tzotzil Télougou Valencienne Vezo Xhosa Yorobà Zapoteky (Andilan-tany) Zoloa tzeltal Éwé
Nanome toromarika momba ny fandaharana vaovao iray ny Filan-kevi-pitantanan’ny Vavolombelon’i Jehovah, tamin’ny 2014, mba hitoriana ny hafatra ao amin’ny Baiboly amin’ny olona any amin’ny farany avaratr’i Eoropa sy Amerika Avaratra. (Asan’ny Apostoly 1:8) Toerana sasantsasany any Alaska (Etazonia), Laponie (Failandy), Nunavut, ary ny Faritany any Avaratrandrefana (Kanada) aloha no nifantohana.
Efa hatramin’ny ela ny Vavolombelon’i Jehovah no nitory tany amin’ireny faritra mitokana ireny. Mijanona vetivety fotsiny anefa izy ireo ary matetika no nizara boky ara-baiboly fotsiny.
Rehefa natao anefa ilay fandaharana vaovao, dia nanasa mpitory manontolo andro (mpisava lalana) hankany telo volana, fara fahakeliny, ireo biraon’ny sampana miandraikitra ny asan’ny Vavolombelon’i Jehovah any amin’ny faritra avaratra. Afaka mijanona ela kokoa ireo mpitory ireo sady afaka manao fivoriana ho an’ny besinimaro mihitsy aza, raha betsaka ny olona te hianatra Baiboly any amin’ny toerana halehan’izy ireo.
Mazava ho azy fa manana ny olana mampiavaka azy ny any Avaratra any. Nipetraka tany amin’ny faritra atsimon’i Kalifornia sy tany Géorgie, any Etazonia, ny mpisava lalana roa voatendry ho any Barrow, any Alaska. Nilatsaka 38 degre ambanin’ny zero (-36°F) ny mari-pana, nandritra ny ririnina voalohany nahatongavan’izy ireo tany. Tao anatin’ny volana vitsivitsy fotsiny anefa dia efa nila ho voatsidik’izy ireo daholo ny trano ao amin’io tanàna io, ary nanomboka fampianarana Baiboly efatra izy ireo. Anisan’ny ampianarin’izy ireo ny tovolahy atao hoe John. Mianatra amin’ilay boky hoe Inona Marina no Ampianarin’ny Baiboly? i John sy ilay ankizivavy miaraka aminy, ary resahiny amin’ny namany sy ny mpiara-miasa aminy izay ianarany. Mampiasa an’ilay programa hoe JW Library amin’ny telefaoniny koa izy mba hamakiana ny teny hodinihina isan’andro ao amin’ny Fandinihana ny Soratra Masina Isan’andro.
Ao anatin’ny faritanin’i Nunavut, any Kanada, no misy an’ilay tanàna hoe Rankin Inlet, ary tsy misy lalana mankany. Nandeha fiaramanidina tany amin’io tanàna kely io àry ny mpisava lalana roa ary nanomboka nampianatra Baiboly olona maro. Rehefa avy nijery an’ilay video hoe Inona no Atao any Amin’ny Efitrano Fanjakana? ny lehilahy iray, dia nanontany hoe rahoviana no hanorenana Efitrano Fanjakana any amin-dry zareo. Hoy koa izy: “Raha mbola eo aho rehefa manorina Efitrano Fanjakana ianareo, dia hivory aho.”
Avo folo henin’ny isan’ny mponina ny isan’ny serfa any Savukoski, any Failandy. Voatendry ho any ny mpisava lalana roa ary nilaza izy ireo hoe: “Mangatsiaka be atỳ sady be lanezy.” Nilaza anefa izy ireo hoe tsara fahatongavana. Hoy izy roa lahy: “Afaka niresaka tamin’ny olona rehetra izahay. Esorin’ny olona ny lanezy eny amin’ny lalana mankany amin’ny tanàna kely sy tanàna lavitra. Lasa mijanona any an-tranony ny olona satria mangatsiaka be ny andro.”
Nahaliana ny olona ny ezaka nataontsika hitoriana momba ny Baiboly any amin’ny toerana lavitra any avaratra. Nitsidika ny ben’ny tanànan’ny toerana iray any Alaska, ohatra, ny mpisava lalana roa. Nilaza zavatra tsara momba an’ilay resak’izy ireo ilay ben’ny tanàna, tao amin’ny tranonkala fampitam-baovao iray, sady nasiany ny sarin’ilay taratasy mivalona hoe Inona ny Fanjakan’Andriamanitra? tao.
Nanao fivoriana tao amin’ny tranomboky ho an’ny besinimaro ny mpisava lalana roa tany Haines, any Alaska, ary olona valo no tonga. Nilaza ny gazety teo an-toerana fa tonga ao an-tanàna ny lehilahy roa avy any Texas sy Caroline Avaratra ary manasa ny olona tsirairay mba hampianariny Baiboly any an-tranon’ilay olona. Izao no teo amin’ny famaranana: “Midira ao amin’ny jw.org raha mila fanazavana fanampiny.”